Retina AI: Iji Amụma AI na-ebuli mgbasa ozi ahịa ma guzobe uru ndụ ndị ahịa (CLV) | Martech Zone
Gburugburu ebe obibi na-agbanwe ngwa ngwa maka ndị na-ere ahịa. Site na mmelite ọhụrụ lekwasịrị anya na nzuzo nke iOS sitere na Apple na Chrome na-ewepụ kuki ndị ọzọ na 2023 - n'etiti mgbanwe ndị ọzọ - ndị na-ere ahịa ga-emegharị egwuregwu ha ka ọ dabara na iwu ọhụrụ. Otu n'ime nnukwu mgbanwe bụ uru na-abawanye na data nke mbụ. Ụdị ga-adabere ugbu a na nbanye na data ndị nke mbụ iji nyere aka kwalite mkpọsa.
Kedu ihe bụ uru ndụ ndị ahịa (CLV)?
Uru ndụ ndị ahịa (CLV) bụ metric nke na-eme atụmatụ ole uru (na-abụkarị ego ha ga-enweta ma ọ bụ oke uru) onye ahịa ọ bụla nyere ga-eweta na azụmahịa n'ime oge ngụkọta oge ha na ika gị na-emekọrịta ihe-n'oge gara aga, ugbu a, na ọdịnihu.
Mgbanwe ndị a na-eme ka ọ bụrụ atụmatụ dị mkpa maka ndị azụmaahịa ịghọta na ịkọ uru ndụ ndị ahịa, nke na-enyere ha aka ịchọpụta akụkụ ndị dị mkpa nke ndị na-azụ ahịa maka akara ha tupu ha azụta ma kwalite atụmatụ ahịa ha ka ha nwee ike ịsọ mpi na ime nke ọma.
Ọ bụghị ụdị CLV niile ka ekepụtara nhata, agbanyeghị - ọtụtụ na-emepụta ya na mkpokọta karịa ọkwa nke onye ọ bụla, yabụ, enweghị ike ịkọ amụma CLV n'ọdịnihu. Site na CLV ọkwa nke onye ọ bụla nke Retina na-ewepụta, ndị ahịa na-enwe ike ịkatọ ihe ọ bụ na-eme ka ndị ahịa ha kacha mma dị iche na onye ọ bụla ọzọ wee tinye ozi ahụ iji bulie uru nke mgbasa ozi ndị ahịa ha na-esote. Na mgbakwunye, Retina nwere ike ịnye amụma CLV siri ike dabere na mmekọrịta onye ahịa na ika a gara aga, na-enye ndị ahịa ohere ịma ndị ahịa ha kwesịrị iji onyinye pụrụ iche, mbelata na nkwalite.
Kedu ihe bụ Retina AI?
Retina AI na-eji ọgụgụ isi arụ ọrụ ịkọ uru ndụ ndị ahịa tupu azụmahịa mbụ.
Retina AI bụ naanị ngwaahịa na-ebu amụma ogologo oge CLV nke ndị ahịa ọhụrụ na-eme ka ndị na-ere ahịa na-eto eto na-eme mkpọsa ma ọ bụ ọwa nhazi atụmatụ mmefu ego na nso nso. Ihe atụ nke ikpo okwu Retina a na-eji bụ ọrụ anyị na Madison Reed bụ onye na-achọ ihe ngwọta nke oge iji tụọ na ịkwalite mkpọsa na Facebook. Ndị otu ebe ahụ ahọrọla ịgba ule A/B gbadoro ụkwụ na ya CLV: CAC (ọnụahịa nnweta ndị ahịa) oke.
Ọmụmụ ihe gbasara Madison Reed
Site na mgbasa ozi ule na Facebook, Madison Reed bu n'obi imezu ebumnuche ndị a: Tulee mkpọsa ROAS na CLV n'oge dị nso, megharịa mmefu ego maka mkpọsa bara uru karị wee ghọta nke mgbasa ozi mepụtara butere CLV kachasị elu: oke CAC.
Madison Reed wepụtara ule A/B site n'iji otu ndị na-ege ntị lekwasịrị anya maka akụkụ abụọ: ụmụ nwanyị dị afọ 25 ma ọ bụ karịa na United States bụ ndị na-abụbu onye ahịa Madison Reed.
Mgbasa ozi A bụ azụmahịa dị ka ọ na-emebu.
Emegharịrị mkpọsa B dị ka akụkụ ule.
N'iji uru ndụ ndụ ndị ahịa, emebere akụkụ ule ahụ nke ọma maka ịzụrụ ihe na adịghị mma megide ndị na-edebanye aha. Akụkụ abụọ ahụ ji otu mgbasa ozi mepụta.
Madison Reed gbara ule ahụ na Facebook na nkewa 50/50 maka izu anọ na-enweghị mgbanwe ọ bụla n'etiti mgbasa ozi. Oke CLV: CAC mụbara site na 5% ozugbo, dị ka nsonaazụ ozugbo nke ịkwalite mkpọsa ahụ site na iji uru ndụ ndụ ndị ahịa n'ime njikwa mgbasa ozi Facebook. Tinyere oke CLV:CAC ka mma, mkpọsa nnwale ahụ nwetara mmetụta karịa, ịzụrụ weebụsaịtị, yana ndebanye aha ndị ọzọ, n'ikpeazụ na-eduga n'ịba ụba ego. Madison Reed echekwabara na ọnụ ahịa n'otu echiche yana ọnụ ahịa ọ bụla ka ọ na-enwetakwa ndị ahịa ogologo oge bara uru karịa.
Ụdị nsonaazụ ndị a na-ahụkarị mgbe ị na-eji Retina. Na nkezi, Retina na-abawanye arụmọrụ ahịa site na 30%, na-akwalite CLV na-abawanye site na 44% na ndị na-ege ntị yiri ya, wee nweta 8x Return na Ad Spend (ROAS) na mgbasa ozi nnweta ma e jiri ya tụnyere usoro ịzụ ahịa ahụkarị. Nhazi nke dabere na ọnụ ahịa ndị ahịa e buru n'amụma n'ọkwa n'oge bụ ihe na-agbanwe egwuregwu na teknụzụ ịzụ ahịa. Ilekwasị anya ya na omume ndị ahịa karịa ọnụọgụ igwe mmadụ na-eme ka ọ bụrụ ojiji data pụrụ iche na nke nwere nghọta iji tụgharịa mkpọsa ahịa ka ọ bụrụ mmeri dị irè, na-agbanwe agbanwe.
Retina AI na-enye ikike ndị a
CLV akara akara - Retina na-enye azụmaahịa ụzọ iji nweta akara ndị ahịa niile iji chọpụta ụzọ dị mma. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ejighị n'aka nke ndị ahịa ga-enye uru kachasị elu n'oge ndụ ha. Site n'iji Retina tụọ nkezi nlọghachi azụ na mmefu mgbasa ozi (ROAS) n'ofe mkpọsa niile yana na-aga n'ihu na-ebute ụzọ na imelite CPA otu a, amụma Retina na-ebute ROAS dị elu nke ukwuu na mgbasa ozi nke kachasị site na iji eCLV. Usoro ọgụgụ isi a nke ọgụgụ isi na-enye ndị ọchụnta ego ụzọ ha ga-esi mata na nweta ndị ahịa bụ ndị na-egosi uru fọdụrụnụ. Ewezuga akara ndị ahịa, Retina nwere ike ijikọ na kewaa data site na ikpo okwu data ndị ahịa maka ịkọ akụkọ n'ofe sistemu.
Mbulite mmefu ego mkpọsa - Ndị na-ere ahịa Strategic na-achọ mgbe niile ụzọ ha ga-esi kwalite mmefu mgbasa ozi ha. Okwu a bụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-echere ruo ụbọchị 90 tupu ha enwee ike ịlele ọrụ mgbasa ozi gara aga ma mezie mmefu ego n'ọdịnihu. Retina Early CLV na-enye ndị na-ere ahịa ike ịme nhọrọ mara mma gbasara ebe ha ga-elekwasị anya na mgbasa ozi ha na-emefu ozugbo, site na idobe CPA ha kachasị elu maka ndị ahịa na atụmanya dị elu. Nke a na-ebuli ngwa ngwa CPA ebumnuche nke mkpọsa uru dị elu iji weta ROAS dị elu yana ọnụego ntụgharị dị elu.
Ndị na-ahụ anya – Retina anyị achọpụtala na ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere nnọọ ala ROAS-na-emekarị gburugburu 1 ma ọ bụ ọbụna ihe na-erughị 1. Nke a na-emekarị mgbe otu ụlọ ọrụ na-emefu mgbasa ozi na-adịghị nhata ha atụmanya 'ma ọ bụ ẹdude ahịa' uru ndụ ndụ. Otu ụzọ isi bulie ROAS n'ụzọ dị egwu bụ ịmepụta ndị na-ege ntị na-ele anya bara uru na ịtọ okpu nkwado kwekọrọ. N'ụzọ dị otú a, azụmahịa nwere ike ịkwalite mgbasa ozi na-emefu dabere na uru ndị ahịa ha ga-ewetara ha n'ikpeazụ. Azụmahịa nwere ike ịlọghachite ugboro atọ na mgbasa ozi ha na ndị ahịa Retina dabere na ndị na-ege ntị yiri uru.
Ịgba Ụgwọ Dabere Uru - A na-ebu ụzọ n'ịzụ ahịa dabere n'echiche na ọbụna ndị ahịa dị ọnụ ala bara uru inweta 一 ma ọ bụrụhaala na ị naghị etinye nnukwu ego n'inweta ha. Site n'echiche ahụ, Retina na-enyere ndị ahịa aka ka ha mejuputa nkwekọrịta bara uru (VBB) na mkpọsa Google na Facebook ha. Ịtọba okpu nkwado nwere ike inye aka hụ na ọkwa LTV dị elu: oke CAC ma na-enye ndị ahịa mgbanwe mgbanwe iji gbanwee usoro mgbasa ozi iji kwado ebumnuche azụmahịa. Site n'ịgba ụgwọ ịgba ọsọ sitere na Retina, ndị ahịa kwalitere nke ọma LTV: ọnụ ọgụgụ CAC ha site n'idebe ọnụ ahịa ịzụrụ n'okpuru 60% nke mkpuchi nzu ha.
Ego na ahụike ndị ahịa - Kọọ maka ahụike na uru nke ndị ahịa gị. Quality of Customers Report™ (QoC) na-enye nyocha zuru oke nke ntọala ndị ahịa nke ụlọ ọrụ. QoC na-elekwasị anya na metrik ndị ahịa na-aga n'ihu yana akaụntụ maka nha anya ndị ahịa wuru site na omume ịzụrụ ugboro ugboro.
Hazie oku iji mụtakwuo
Tags: ule uleaiAmamịghe echichecaknjikarịcha mmefu ego dị mmaclv na-eduga akaraahụike ndị ahịaahịa ndụ uruOnye njikwa mgbasa ozi Facebookndu akaraMadison ahịhịaamụma clvretina aiọnụ ahịa dabere